သိက္ခာရှိစွာနဲ့ပဲ လမ်းခွဲတတ်ကြပါစေ လောကကြီးထဲမှာ ယောက်ျားလေး ဖြစ်စေ မိန်းခလေး ဖြစ်ပါစေ … ကိုယ့်ချစ်သူက နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတာတွေ ၊ ခြေရှုပ်နေတာတွေကို သိရက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်နားလည် ခွင့်လွှတ် ပေးပြီး အတင်း လိုက်တွယ်ကပ် နေတာတွေဟာ လောကကြီးထဲ ကိုယ်နဲ့ တူတန်တဲ့ ယောက်ျား ‘ Continuous reading
ဉာဏ်ရည်မမီတဲ့ ယောက်ျားတွေက ပိုမိုဖောက်ပြန်တတ်လေ့ရှိကြောင်း သုတေသီများထုတ်ပြန် ဦး နှောက် မ ကောင်း တဲ့ သူ တွေ က သာ ဖောက် ပြန် တတ် လေ့ ရှိ ကြောင်း သု တေသီ တွေ က လေ့ လာ Continuous reading
သင့် ဆံသားကိုပျော့ပျောင်းပြီး တောက်ပစေမည့် ထောပတ်သီး
29/09/2019 Yan Naing 0
သင့် ဆံသားကိုပျော့ပျောင်းပြီး တောက်ပစေမည့် ထောပတ်သီး ခေါင်းလျှော်ပြီ ဆိုရင် တော်တော် များများလည်း Conditioner ကိုသုံးကြမှာပါ ။ Chemical လုံးဝ မပါတဲ့ Conditioner ကောင်းကောင်း သုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သဘာဝ နည်းလမ်းတွေ သုံးပြီး ကိုယ်တိုင် လုပ်မှပဲ ရမှာပါ ။ Continuous reading
ဒဏ်ရာရပြီး ရန်သူနေအိမ်မှန်းမသိဘဲ ဝင်သွားခဲ့မိတဲ့ တပ်ကြပ်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်
ဒဏ်ရာရပြီး ရန်သူနေအိမ်မှန်းမသိဘဲ ဝင်သွားခဲ့မိတဲ့ တပ်ကြပ်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် ကျွန်တော်ဟာ တပ်မတော်က တပ်ကြပ်တစ်ယောက်ပါ။ ညဦးပိုင်းက ကျွန်တော်တို့ တပ်စု ကင်းလှည့်နေရင်း ရန်သူ့တပ်နဲ့ တွေ့လို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ရန်သူနဲ့ အင်အားချင်း မယှဉ်နိုင်လို့ ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးကြရတယ်။ မှောင်ထဲမှာ ဆုတ်ခွာကြရင်းနဲ့ ကျွန်တော်လည်း တပ်နဲ့ ကွဲသွားတယ်။အခု Continuous reading
”ကျွန်တော်အမေ့ကိုမုန်းတယ်…” ကျွန်တော် အမေ့ကိုမုန်းတယ်… အမေဟာ သူများတွေရဲ့ အမေနဲ့မတူဘူး…. မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲရှိတယ်…. ရုပ်ဆိုးလိုက်တာ… အရမ်းကို ရှက်ဖို့ ကောင်းတာပဲ… ဆိုင်လေးသေးသေး ၊စုတ်ပြတ်ပြတ်လေးမှာ အမေကဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေ ရောင်းတယ်။ ဒီလို ဆင်းဆင်းရဲရဲ ဈေးရောင်း နေတဲ့ အမေ့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်အရမ်းရှက်တယ် ။ အမေ့ကြောင့် လူတွေက ကျွန်တော်တို့ကိုအထင်သေးကြတယ်လို့ Continuous reading